Somaliland: Shirweynaha Horumarinta Beeraha oo furmay | Aftahan News
Somaliland: Shirweynaha Horumarinta Beeraha oo furmay
Hargeysa (Aftahannews)- Madaxweyne ku xigeenka Somaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil (Saylici), ayaa maanta furay shirka Horumarinta Beeraha oo ay soo qaban qaabisay Wasaaradda Horumarinta Beeruhu.
Shirkan oo muddo laba maalmood ah socon doona, waxa ka soo qaybgalay Wasiirro, Guddoomiyaha Baanka dhexe, aqoonyahannada beeraha iyo beeraleyda dalka.
Waxa furitaankii shirkaas ka hadlay Wasiirka Horumarinta Beeraha Axmed Muumin Seed, waxaanu ka warramay qorsheyaasha Wasaaradda ee la xidhiidha sidii Somaliland ay u gaadhi lahayd isku filaansho dhinaca cuntada ah. Waxa kaloo uu ka hadlay siday u taageeraan beeraleyda dalka.
Wasiirka Horumarinta Maaliyadda Sacad Cali Shire, ayaa sheegay in loo baahan yahay in kor loo qaado wax-soo-saarka Beeraha, waxaanu tilmaamay inay dalka dhibaato ku hayso lacagta ku baxda cuntada dibadda laga soo waaridaa.
Madaxwweyne ku xigeenka Somaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil (Saylici) oo si rasmi ah u furay shirkaasi ayaa Wasaaradda Beeraha ku bogaadiyey hawlaha horumarinta wax-soo-saarka tacabka beeraha.
Madaxweyne u xigeenku waxa uu sheegay in xukuumadda Somaliland ay ka go’an tahay sidii ay wax ula qaban lahayd beeralayda, isagoo ganacsatadana ugu baaqay inay maalgashadaan beeraha dalka, si waddanku uga kaaftoomo cuntooyinka dibada laga soo waarido.